အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ကျွန်မနဲ့ အချစ်ဦး
34 Responses to “ကျွန်မနဲ့ အချစ်ဦး”
သိပါဘူး...မချောအကြောင်းမှတ်လို့ ဖတ်လာတာ...အောက်ရောက်တော့မှာ ဘာသာပြန်တဲ့...းး(((
နတ်သမီးရဲ့မေမေက နတ်သမီးကို (၃၈)နှစ်မှာကိုယ်ဝန်“စ”ဆောင်တာလေ...
မှန်တယ် ချောရေ... မနွယ်တို့ အထက်တန်းကျောင်းသူ ဘဝက အဖြစ်တွေဟာ တက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ ရီစရာတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီအချိန်က အဖြစ်တွေက အခုလို အချိန်မှာလည်း ဒီလိုပဲ ပြန်ခံစားမိတယ်။ ရင့်ကျက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ငယ်ငယ်က အဖြစ်အပျက်တွေကို အားနည်းမှုတခုအနေနဲ့ ပြန်မြင်ယောက်တဲ့ သဘောပေ့ါ။
ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ပိုစ့်လေး ဖတ်လို့ကောင်းသလို ပေးထားတဲ့ ရသလေးက အဖိုးတန်ပါတယ်။
သြော်.. . .ဒါကြောင့် မချော တစ်ယောက် အခု တလော ပျောက်နေတာကိုး. . .
အခုတော့ အဆင်ပြေသွားပြီလား. . .
အနာရော သေချာ ကျက်သွားရဲ့လား. . ဒဏ်ရာ ဆိုတာ အကင်းမသေရင် ပိုဆိုးတတ်တယ်နော်။
ဟုတ်တယ် အချိန်တွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီးရင် အရူးထခဲ့တာတွေအတွက်
ရယ်စရာတွေဖြစ်သွားမှာပါ။ အင်း...ဒဏ်ရာကိုတော့ အကင်းသေတဲ့အထိကုဖို့လိုမှာပေါ့နော်။
အကင်းမသေရင် အနာဟောင်းက အညှော်မိလို့ပြန်ထရင်တော့ပိုပြီး အခံရခက်မယ်ထင်တယ်။
မချောပို့စ်လေးတွေအမြဲဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ လေးစားပါတယ် မချောရေ...။
မသိပါဘူးဗျာ ... မချောအကြောင်းလားလို့ ... အဟီး ...
ဟုတ်ပါတယ် အချစ်ဦးနဲ့ ဘယ်တော့မှ မဆုံဆည်းကြဖူးဆိုတာ အမှန်ပဲ ...
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ အချစ်က ချစ်ဖို့ပဲ သိတာ ...
နားလည်မှုတွေ မပေးနိုင်ဘူး ... ယုံကြည်မှုကို မတည်ဆောက်နိုင်ဘူး ...
ပိုဆိုးတာက ချစ်လို့ ဖြစ်လာတဲ့ သ၀န်တိုမှု၊ သီးမခံနိုင်မှု၊ အချစ်ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကြိုးကို ဦးနှောက်နဲ့ မစဉ်းစားချင်သေးတဲ့ အတွက် ခုလိုမျိုးဖြစ်ကြတာပါ။ စိတ်ကစားမှုတွေလည်း ပါတာပေါ့ဗျာ ...
အဟီး ... လျှာရှည်သွားဧ။် ..း)
မတည်မြဲဘူးဆိုတာ မှန်ပါတယ် ...
ညီမတော့ ဒီပိုစ့်လေးကို သိပ်သဘောကျတာပဲ။ အသည်းကွဲပြီး ရူးမတတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုတွေ့ခဲ့ဖူးတယ်လေ။ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေထဲမှာတောင်ရှိပါတယ်။ ဒီလို အချိန်မျိုးမှာ ဖေးမကူညီပေးမယ့်သူ(မိဘ သို့ သူငယ်ချင်း)က တော်တော်အရေးကြီးတယ်။ ကြာသွားတော့လည်း ပြုံးစရာလေးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့။
အင်း...ဟုတ်ပါတယ်...ဘယ်လို ဆိုးရွားတဲ့ ခံစားချက်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါစေ... အချိန်က အကောင်းဆုံးသမားတော်ပါပဲ...အချိန်တန်တော့လည်း ရီစရာ၊ ပြုံးစရာလေးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့လေ...ဒါပေမယ့် ခံစားမှုပြင်းထန်နေတဲ့ ကြားကာလမှာတော့ ကမ္ဘာပျက်သလို ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်...
(သူ့အကြောင်းများလို့ အထင်တကြီးနဲ့ လာဖတ်ပါတယ် ဘာသာပြန်ကြီးကိုး...အထင်ကြီးလိုက်မိတာကိုက ငါ့အမှားပါ :D )
အမေနှင့် သမီးတွေရဲ့ နီးစပ်နားလည်မူ့ဟာ ဘယ်လူမျိုးမှာမဆို သူတယ်လို့၊ ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီးထင်လိုက်မိတယ်၊
အစက ဘာသာပြန်လို့တောင်မထင်မိဘူး၊ …နီးစပ်လွန်းလို့
Eeee .......... I don't have very First lover till now. How can I get that feeling?
But, Very Good to read it. Good Luck ! HaveaSweet Time. Take Care ......
နောင်တချိန်မှာ ပြုံးစရာဖြစ်တာကို လက်ခံပေမယ့် ရူးခဲ့တာတွေကိုတော့
နောင်တမရနိင်ဘူး။ လက်ရှိအချိန်တိုင်းအတွက် ကြုံလာတဲ့ အဖြစ်အပျက်အပေါ်
လူသားတစ်ယောက်လို တုန့်ပြန် ခဲ့တာကြောင့်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေဟာ နောင်တချိန်မှာ ပြုံးစရာ ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ အသိလေးပေးတဲ့ ဒီပို့စ်ကိုတော့ သဘောကျတယ်။ အသဲကွဲတဲ့သူရှိရင် နင့်နင့်သီးသီး မခံစားစေဖို့ သတိပေးထားသလိုပါပဲ။
အချစ် .. အချစ် .. !!!
ထောက်ခံတယ်.. ထောက်ခံတယ်.. အသည်းကွဲတုန်းကတော့ တော်တော် ခံစားလိုက်ကြတာပဲ.. နောက်တော့လည်း ပြီးသွားပြီး ကိုယ့်လမ်းကိုယ် ဆက်လျှောက်ကြတာပါပဲလေ..
(ကိုယ်တွေ့ မဟုတ်ဘူးနော်.. အနီးအနားမှာ တွေ့နေမြင်နေရလို့ ပြောတာပါ)
ချစ်သူ့သင်ခန်းစာလေးတွေပေါ့။ အတိတ်က ကြေကွဲခဲ့တာတွေတာ အခုအချိန်မှာ ပြုံးရွှင်ဖွယ်ဖြစ်နိုင်သလို၊ အခုအချိန်ကြေကွဲနေတာဟာလဲ နောင်တစ်ချိန်ကျရင်တော့ ပြုံးစရာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့တစ်လေတော့ ချွတ်ယွင်းချက်ပေါ့လေ။ အချစ်ကြီးရင် အမျက်ကြီးတယ်ဆိုသလိုမျိုးပေါ့။ အမာရွတ်မြင်တိုင်း ကေ၀ဋ်ကို သတိရနေတတ်ကြတယ်။ အဲဒီလိုအမှတ်အတေးကြီးတဲ့ ကြေကွဲမှုမျိုးက အားလုံးလွတ်ကင်းနိုင်ရင်တော့ အကောင်းသား။
ွှTime is the big healer ပါပဲ နောက်ဆုံးကျတော့လည်း နော....း)
ဘာသာပြန်တော့...good ရှယ်ပဲ မယ်ချောတို့ကတော့
လူဆိုတာကလည်းကိုယ့်အဖြစ်သာအကြောင်းအရာအားလုံးထက်အရေးအကြီးဆုံးလို့ထင်တတ်ကြတာလေ။ဆိုလိုတာက ပထမဆုံးရည်းစားနဲ့ စကွဲဘူးတဲ့သူတိုင်း၊ အဲလူတွေထဲမှာမှ ဒီလူကိုဘ၀တသက်လုံးလက်တွဲသွားမယ်လို့ စိတ်ကူးမိခဲ့မိတဲ့သူတွေကတော့ အဆိုးဆုံး ခံစားကြရတာပေ့ါ။ ပထမဆုံးအကြိမ်လည်းဖြစ်ပြန်၊ စိတ်ကူးရည်မှန်းချက်တွေကလည်း လန်းဆန်းတက်ကြွ နေတုန်း ဆိုတော့ ပိုခံရတာပေ့ါ။ အဲဒီအချိန်မှာမှ ဒီလိုအမေမျိုးရဲ့ သမီးဖြစ်ခွင့်ရတဲ့သူ(အနားမှာနားလည်ပေးနိင်တဲ့ဘယ်သူမဆို)ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တာ တော်တော်ကံတရားက ဖေးမခဲ့လို့ပါပဲ။ လောကကြီးမှာမိဘနဲ့သားသမီး၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ၊ ညီအကိုမောင်နှမ၊ စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ချင်းအားလုံးဟာ နားလည်မှု့တွေ တည်ဆောက်ပီး ရှေ့ဆက်လှမ်းနေကြတာလို့ ကိုထင်တယ်လေ။ နားလည်မှု့မရှိတော့တဲ့ တချိန်မှာအာလုံးဟာပြိုလဲပျက်စီးသွားမှာပဲ။ ဒီစာရဲ့အနှစ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ ဒီအချိန်မှာ သည်းကြွေပြုန်းမတတ် ခံစားနေရတာတွေဟာ နောင်တချိန်မှာ ရီစရာတောင်မဟုတ်ပဲ ပြုံးစရာလောက်သာ ကျန်တော့တယ်ဆိုတာကတော့ ကြုံဘူးသူတိုင်း အမှန်ပဲဆိုတာ လက်ခံကြမှာပါ။ မှန်ပါတယ်။ အချိန်ကစကားပြောမယ်ဆိုပေမဲ့ နားလည်ပေးမဲ့သူ အနားမှာရှိမှ လွယ်ကူစွာဖြတ်သန်းနိုင်မှာပါ။ အဖြစ်ပျက်ချင်းတော့မတူပေမဲ့ ဒီလိုနားလည်မှု့ရှိတဲ့ လူတယောက်ကြောင့် ကိုယ့်ဘ၀လဲဒီချိန်မှာပြုံးရုံပဲပြုံးနိုင်နေတာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီစာကိုရေးတဲ့ ချောကိုရော ကိုယ့်ကိုမြောင်းထဲက ကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့သူကိုရောပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အမယ်လေး..ဒီပို့စ်လေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကို Gtalk မှာတွေ့ထဲက စွဲဆောင်မှုအားကောင်းနေလို့ မနက်ထဲက မရမက site ကို.. ၀င်နေတာ ခုမှရတော်မူတော်တယ်။ ( ဆိုးလိုက်တဲ့ connection နော်)..။ ဟွန်း... ထင်တော့ထင်သား။ သူများအကြောင်းကြီးကို..။ ကိုယ်တိုင် အသည်းမကွဲဘူးပေမယ့် အသည်းတွေ ကွဲတာတွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဖူးစာမပါလို့ဆိုပြီးတော့ မချိပြုံးလေးတွေတော့ ပြုံးကြတာကိုလည်း တွေ့ဘူးပါတယ်..။
" ...အသည်းလေးကွဲကာ မျက်ရည်တွေနဲ့ပေါ့... ဒီမှာ..... "..ဆိုတဲ့ အဲလက်စ်ရဲ့ သီချင်းလေးတော့ ကြိုက်မိသား။
ခုလောလောဆယ်တော့....တွေးတာနဲ့တင်...ဆက်မတွေးချင်လို့ ... ခက်လှပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်ရေး အသည်းကွဲဇာတ်လမ်းလေးထင်နေတာ ဘာသာပြန်မို့ တော်သေးတာပေါ့။ မစိမ်း ဘာသာပြန်ဇာတ်လမ်းလေးကောင်းတယ်ဗျာ။ အချစ်ထက် မေတ္တာတရားရဲ့ အားသာမှုကို ပြထားတာပဲ။
ကိုယ်တိုင်တော့ အချစ်ဦးနဲ့ကွဲတာ မခံစားဖူးပေမယ့်
အခုလောလောဆယ် ခံစားနေရတဲ့ ညီမငယ်တစ်ယောက်ဖတ်ဖို့
ဒီပိုစ့်လေးကို လင့်ခ်နဲ့ အီးမေးလ်လှမ်းပို့ထားလိုက်ပြီ။
ခုတော့ ၁ နှစ်ကျော်သွားပြီ။ မေ့လို့မရသေးဘူး။ အဟင့်.............
Tin Tin Aung said...
အစ်မချောလို့ပဲ ညီမလည်းချစ်သူကို သိမ့်ချစ်ခဲ့လို့ ရှုးသွပ်စွာခံစားခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အခုချိန်ထိတော့ ပြုံးစရာမရှိသေးပါဘူးအစ်မရယ်..
ကျွန်မချစ်သူကို သိမ့်ချစ်တော့ ခုထိမေ့လို့မရသေးပါဘူး....
ညီမကတော့ ညီမချစ်သူလည်းဖြစ်၊ ငယ်သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တဲ့
ညီမလည်း ဒီဝေဒနာမျိုးခံစားခဲ့ရတော့ အစ်မကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်
မမဆုတောင်းပေးနော်.. ညီမချစ်ဦးသူ လက်ရှိချစ်သူနဲ့ပဲ ဆုံဆည်းပါစေလို့လေ.. နော် မမ